प्रचण्डलाई ओलीको प्रश्न- १० हजार बाँडेर हुन्छ? पूर्वलडाकूको व्यवस्थापन किन गर्नुभएन? - ramechhapkhabar.com
प्रचण्डलाई ओलीको प्रश्न- १० हजार बाँडेर हुन्छ? पूर्वलडाकूको व्यवस्थापन किन गर्नुभएन?
१० मंसिर चितवन ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रले पूर्व लडाकूको व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताएका छन्। उनले घाइते पूर्वलडाकूको व्यवस्थापन अब एमालेले गर्ने पनि बताए।
उनले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारमा रहे पनि पूर्वलडाकू व्यवस्थापन र उनीहरूको उपचारलगायतमा ध्यान नदिएको आरोप लगाए।
‘प्रचण्डजी शान्ति प्रक्रिया किन टुंगो लगाउनु हुन्न? घाइतेको उपचार किन गर्नु हुन्न? मनपरेका मानिसलाई १० हजार बाँडेर हुन्छ? पैसा बाँडेर समस्या समाधान हुन्छ?,’ चितवनमा आज दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा उनले भने, ‘लडाकूलाई रोजगारी दिने हो सरकारमा तपाईं हुनुहुन्छ।’
उनले लडाकू व्यवस्थापन गर्ने पावर देखाउन प्रचण्डलाई आग्रह गरेका थिए। ओलीले पूर्वलडाकूको व्यवस्थापन अब एमालेले गर्ने पनि बताए। माओवादीले लडाकूलाई विर्सेर मेयर र मन्त्री आफ्ना आफन्तलाई बनाएको पनि ओलीको आरोप थियो।
अबको चुनावमा एमालेले एकल बहुमत ल्याउन जरुरी छ : अध्यक्ष ओली
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अबको चुनावमा एमालेले एकल बहुमत ल्याउन जरुरी रहेको बताएका छन् । चितवनमा शुक्रबार (आज)देखि सुरु भएको एमालेको १०औं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।
त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले अब चुनावको तयारीमा जुट्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अब हामी चुनावको तयारीतर्फ जानेछौं । एकल बहुमत ल््याउने छौं ।’
त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले एमाले राणाशाहीलाई भत्काउने, पञ्चायत, राजतन्त्र फाल्ने आन्दोलनदेखि लिएर अन्धकार युगबाट उज्यालोतिर ल्याउने वैचारिक र व्यवहारिक ढङ्गबाट नेतृत्व गर्दै आएको पार्टी भएको बताए ।
उनले भनेका छन् , ‘आजका समस्याहरू ठीक ढंगले पहिचान गर्ने र समस्याहरूलाई समाधान गर्ने ऐतिहासिक अभिभारा बोकेको पार्टी हो यो । सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने अभिभारा बोकेको, आर्थिक सामाजिक समस्या समाधान गर्नै अभिबारा बोकेको पार्टी हो ।’
त्यस्तै उनले उग्र वामपन्थ नभई व्यवहारिक रूपमा अग्रगामी परिवर्तन कसरी गर्न सकिने र सम्भव हुने व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने पार्टीको रूपमा रहेको एमाले रहेको बताए ।